PressReader - Isolezwe: 2017-10-13 - Lusabonakala ufa oludalwe yizinhlelo zowengcindezelo
Lusabonakala ufa oludalwe yizinhlelo zowengcindezelo
MHLELI: Ukhetho lwentando yabantu eNingizimu Afrika ngo-1994 lwabeletha uhulumeni omusha. Lwalukhombisa ukuguquka okukhulu noma izinyathelo zokuqala ekufezeni amaphupho abantu baseNingizimu Afrika.
Uma kuqhathaniswa nobandlululo, uhulumeni wentando yabantu wenze okubalulekile ekuthuthukisweni kwezomnotho nezenhlalakahle, walungisa izigigaba zaphambilini ikakhulukazi maqondana nenqubomgomo yabasebenzi.
Ngesikhathi sobandlululo kwakungekho ukulingana eNingizimu Afrika nenqubomgomo yangaleso sikhathi ingalungile. Ukuqashwa emsebenzini nomholo kwakunqunywa yibala lakho. Izimakethe zabasebenzi zazenziwe ngendlela ezocindezela umuntu omnyama, kuqinisekiswe nokuthi isisekelo sempilo yakhe simgcina esendaweni eyihlazo.
Nakuba uhulumeni wentando yabantu enze umzamo omkhulu ukuthuthukisa ezenhlalakahle nezomnotho kodwa ufa lwezinhlelo zengcindezelo lusabonakala yize sekuphele iminyaka engaphezulu kuka-20 singenile kuhulumeni wentando yabantu.
Ukungalingani nobuphofu kungenye yezinselelo ezinkulu ezibhekene neNingizimu Afrika namhlanje.
Ukungalingani kuqhutshelwa phambili yizinhlelo zezomnotho osanganyelwe yidlanzana lokhu okwenza kwaceba ingxenye encane yabantu kwashiya abaningi bempofu.
Akungabazeki ukuthi isimo samanje sezenhlalakahle siwumphumela wezinsalela zofa oludalwe wumbuso wobandlululo. Isimo samanje sabaningi abamnyama baseNingizimu Afrika abathwala ubunzima babeka nempilo yabo engcupheni, belwela inkululeko, abasoze baphathwa ngezindlela ezihlukene uma kukhulunywa ngomlando waseNingizimu Afrika.Ngakho-ke singakwazi ukufika esiphethweni sokuthi isimo samanje sezenhlalakahle yezwe siwukuphindaphindeka kwezehlakalo ezedlule ezenzeka ngesikhathi samakoloni nokuhlukaniswa kwabantu ngezindawo zokuhlala ngokobuhlanga babo nomcebo wagcina ezandleni zabambalwa, abaningi basela beconzulelana izimvuthuluka. Zimasa Mahlungulu UMFUNDI WASE-UKZN